Nexus စျေး - အွန်လိုင်း NXS ပွောငျး
စျေးနှုန်းနှင့် ပွောငျး ကို Nexus (NXS)
သငျသညျ (ကစျေးနှုန်းအရ) ပွောငျး လိုအပ်နေသောကြောင့်သင်ဒီမှာဖြစ်ကောင်းဖြစ်ကြ Nexus (NXS) နိုင်ငံခြားငွေကြေးသို့မဟုတ်အွန်လိုင်း cryptocurrencies မှ. ထက်ပိုမိုပြောင်းလဲနိုင်ဖို့ထက်ပိုမိုလွယ်ကူဘာမှမရှိဘူး 170 ငွေကြေး နှင့် 2500 cryptocurrencies ဤတွင်, အွန်လိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ငွေကြေး ပွောငျး ကိုသင်အခုလုပ်ကူညီပေးပါမည်။ မရင့်ပြောင်းလဲဖို့အခမဲ့ခံစားရ Nexus ဒါပေမယ့်လည်းမဆိုအခြားရရှိနိုင်ငွေကြေး။
Market ကဦးထုပ်: $13 482 816.00
သငျသညျမှာအားလုံးကြည့်ရှုရန်အဘို့အဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါကစိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်လိမ့်မည် လဲလှယ်၏နှုန်းထားများ Nexus တဦးတည်းစာမျက်နှာပေါ်တွင်.
Nexus များ၏စျေးနှုန်းများ ကမ္ဘာ့အဓိကငွေကြေး
NexusNXS သို့ အမေရိကန် ဒေါ်လာUSD$0.24NexusNXS သို့ ယူရိုEUR€0.202NexusNXS သို့ ဗြိတိသျှ ပေါင်GBP£0.183NexusNXS သို့ ဆွစ် ဖရန့်CHFSFr.0.219NexusNXS သို့ နော်ဝေ ခရိုဏာNOKkr2.16NexusNXS သို့ ဒိန်းမတ် ခရိုဏာDKKkr.1.51NexusNXS သို့ ချက်ခိုရိုနာCZKKč5.32NexusNXS သို့ ပိုလန်ဇလော့တီPLNzł0.894NexusNXS သို့ ကနေဒါ ဒေါ်လာCAD$0.319NexusNXS သို့ ဩစတြေးလျ ဒေါ်လာAUD$0.332NexusNXS သို့ မက္ကဆီကို ပီဆိုMXNMex$5.38NexusNXS သို့ ဟောင်ကောင် ဒေါ်လာHKDHK$1.86NexusNXS သို့ ဘရာဇီး ရီးယဲBRLR$1.29NexusNXS သို့ အိန္ဒိယ ရူပီးINR₹18.01NexusNXS သို့ ပါကစ္စတန် ရူပီးPKRRe.40.53NexusNXS သို့ စင်္ကာပူ ဒေါ်လာSGDS$0.329NexusNXS သို့ နယူးဇီလန် ဒေါ်လာNZD$0.36NexusNXS သို့ ထိုင်းဘတ်THB฿7.48NexusNXS သို့ တရုတ် ယွမ်CNY¥1.67NexusNXS သို့ ဂျပန်ယန်းJPY¥25.35NexusNXS သို့ တောင်ကိုရီးယား ဝမ်KRW₩284.76NexusNXS သို့ နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်းရာNGN₦91.44NexusNXS သို့ ရုရှ ရူဘယ်RUB₽17.64NexusNXS သို့ ယူကရိန်း ဟီရီဗင်းညားUAH₴6.66
NexusNXS သို့ BitcoinBTC0.00002 NexusNXS သို့ EthereumETH0.000607 NexusNXS သို့ LitecoinLTC0.004 NexusNXS သို့ DigitalCashDASH0.00237 NexusNXS သို့ MoneroXMR0.00257 NexusNXS သို့ NxtNXT17.05 NexusNXS သို့ Ethereum ClassicETC0.0335 NexusNXS သို့ DogecoinDOGE66.81 NexusNXS သို့ ZCashZEC0.00243 NexusNXS သို့ BitsharesBTS9.18 NexusNXS သို့ DigiByteDGB8.8 NexusNXS သို့ RippleXRP0.782 NexusNXS သို့ BitcoinDarkBTCD0.00808 NexusNXS သို့ PeerCoinPPC0.826 NexusNXS သို့ CraigsCoinCRAIG106.8 NexusNXS သို့ BitstakeXBS10 NexusNXS သို့ PayCoinXPY4.09 NexusNXS သို့ ProsperCoinPRC29.41 NexusNXS သို့ YbCoinYBC0.000126 NexusNXS သို့ DarkKushDANK75.15 NexusNXS သို့ GiveCoinGIVE507.24 NexusNXS သို့ KoboCoinKOBO52.65 NexusNXS သို့ DarkTokenDT0.221 NexusNXS သို့ CETUS CoinCETI676.38